TSY FANDRIAM-PAHALEMANA ETO IARIVO : Olona tsy ara-dalàna miisa 48 sarona, polisy ny 02 tamin’izy ireo
Ho fametrahana tanàna mirindra sy milamina eto an-drenivohitra Antananarivo sy ny manodidina dia mitohy ny ezaka sahanin’ny eo anivon’ny Polisim-pirenena. 15 septembre 2021
Efa am-bolana maro nanomboka tamin’ity taona 2021 ity, izay efa nisy ny asa fitandroana ny filaminana nahazoana vokatra ary notohizana tamin’ity volana septambra ity. Ny tatitra voarainay ny fiandohan’ny herinandro lasa teo àry dia fantatra fa nahetsika avokoa ny mpitandro filaminana misahana ny fifamoivoizana, ireo mpanao asa fisafoana ny tanàna. Mahavelombolo ny mponina amin’ny Faritra maro moa izany amin’izao fotoana izao.
Fiara miisa 283 nosavaina
Ny antontanisa voaray nanomboka ny alahady 05 septambra ka hatramin’ny alatsinainy faha-06 septambra 2021 tamin’ny 06 ora maraina raha ny eo amin’ny sehatry ny fifamoivoizana dia fiara miisa 283 no nosavaina ka fiara 20 tamin’ireo sy môtô miisa 08 no najanona noho ny tsy fisiana jiro. Moto miisa 11 ihany koa no nosakanana noho ny tsy fisiana fitaratra fijerena any afara na « rétroviseurs » ary môtô 02 nosakanana noho ny tsy fanaovana aroloha. Hentitra ireo Polisy tamin’ny fisavana tampotampoka natao satria dia ireo tsy fahatomombanana heverin’ireo mpamily sasany ho maivamaivana no anisany mahatonga ny loza mahatsiravina misesisesy eto an-drenivohitra. Nogiazana ary koa efa nahazo ny sazy tandrify azy avy ankehitriny ireo tsy nanara-dalàna tratra ireo hatreto. Ny tompon’andraikitra eo anivon’ny Polisy kosa dia tsy mitsahatra manentana ireo olona mpampiasa fiarakodia, môtô, bisikileta mba hanara-maso sy hikojakoja ny fananany avy ka hampihena ireo trangana lozam-piarakodia nahazo vahana.
Harom-paosy, vaky trano…
Ny fiandohan’ny herinandro teo dia fantatra fa olona miisa 168 no voasakana sy nanaovana fizahana tampoka manokana. Ny 09 tamin’ireo no voalaza ho tsy nitondra kara-panondro. Olona 20 kosa no voasambotra noho ny antony fandikan-dalàna samihafa toy ny harom-paosy, vaky trano sy fanendahana. Olona miisa 48 no voasambotra sy nampidirina “violon”. Ny tatitra voaray hatrany no nanazava fa ireo olona tratra miisa 11 dia tao amin’ny kaomisaria foibe eto Antananarivo, ka ny 02 tamin’ireo dia Polisy noho ny tsy fahaizana mitondra tena sy mifehy ny asany. Ny 37 kosa dia tany amin’ireo Kaomisarian’ny Polisy ao anatin’ny boriborintany izay miisa 08 eto an-drenivohitra.
Manohy mandrakariva ny ezaka amin’ny ady amin’ny tsy fandriam-pahalemana moa ny eo anivon’ny Polisim-pirenena hatreto.